“Hiragasy makotrokotroka”: nangotraka ny fifanandrinan-dRakotosolofo sy Ramiadamahefa | NewsMada
“Hiragasy makotrokotroka”: nangotraka ny fifanandrinan-dRakotosolofo sy Ramiadamahefa
Par Taratra sur 09/09/2019
Omaly ny andro fahadimy amin’ny “Hiragasy makotrokotroka” andiany fahasivy, hetsika karakarain’ny Ofisim-paritry ny fizahantany eto Analamanga (Ortana), isan-taona. Na namirifiry aza ny andro, nampitera-tsemboka ny mpijery ny fahavononan’ireo tarika roa, Rakotosolofo Betsinjaka avy any Fenoarivo sy Ramiadamahefa avy any Ambohimandroso, izay samy niady mafy tamin’ny fifanandrinana.
Samy nanan-katokona ny an-daniny sy ny an-kilany tamin’ny fahaizana milalao teny sy ny fampiasana oha-pitenenana samihafa ary ny ventin-kevitra tian-kampitaina, tamin’ny kabary sy ny hira. Tsy vao izao fa efa samy nandray anjara tamin’ny fifaninanana “Hiragasy makotrokotroka” ihany koa izy ireo, hany ka tsy zanak’omby ampianarin-domano.
Lafin-javatra maro ny hitsarana ny tarika tsirairay, toy ny hatsaran’ny fisehoana an-tsehatra, ny fiavahan’ny hira, ny fahaiza-mamorona eo amin’ny fiakanjo ary ny firaisankinan’ny mpikambana rehetra ao amin’ny tropy. Andrasana fatratra, araka izany, izay ho tafakatra amin’ny dingana manaraka, amin’ny tropin-dRamiadamahefa sy Rakotosolofo Betsinjaka.
Raha tsiahivina, tsy nijanona teto afovoan’Antananarivo ny “Hiragasy makotrokotroka” tamin’ity andiany fahasivy ity fa nentina nitety ireo toerana mahaliana sy manan-tantara eto Analamanga, toy ny teny Talata Volonondry, Ambohimanga Rova, Ambatomanga ary ny tany Sambaina Manjakandriana.
Tanjona amin’izany ny hampahafantatra bebe kokoa ireo toerana ireo sy ny hanome fahafaham-po ireo mpankafy hiragasy, izay tsy mahita izany matetika. Marihina fa hitohy eto an-dRenivohitra kosa ny adin-kiragasy, hatramin’ny 6 oktobra izao.